इँटा उद्योगको धुवाँ र खरानीले स्थानीयलाई सास्ती - Naya Patrika
इँटा उद्योगको धुवाँ र खरानीले स्थानीयलाई सास्ती
सिरहा, ३० फागुन | फागुन ३०, २०७४
सिरहा नगरपालिका–१५ सुखचैनास्थित बस्तीबीचमा खुलेको ऋषि इँटा उद्योगका कारण स्थानीयले सास्ती पाएका छन् । उद्योगको चारैतिर रहेका घरभित्रै धुवाँ र खरानी पुग्ने गरेको छ । उद्योगको पूर्वमा सोनारटोली, प्रसाही, सुखचैना, पश्चिममा मुस्लिमटोल, माडर बजार, खैरटोका र उत्तरमा धनुक टोली, मुसहरटोल, खिरौना पर्छ । दक्षिणतर्फ एक किलोमिटर टाढा भारतीय सीमाक्षेत्र दशगजा पर्ने स्थानीय उपेन्द्र मण्डलले बताए । नेपालतिर सीमाक्षेत्रसम्मै बस्ती छ।
स्थानीय अखतरी खानुतले हावा चल्दा धुवाँ र खरानी घरभित्रै आउने बताइन् । ‘पूर्वबाट हावा चलेपछि घरमा बस्नै मुस्किल पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘धुँवासँगै कोइलाको गोला भित्र पस्छ, पानी र खानामा पर्छ ।’
आँगनमा सुकाएका कपडा कालो हुने गरेको स्थानीय अनिताकुमारी मण्डलले बताइन् । उनले भनिन्, ‘इँटा उद्योग सञ्चालन भएदेखि सुकाएका कपडा काला हुन्छन्, कपडामा कालो छिर्का बस्छ ।’ बारीमा लगाएको तरकारी पनि कालै हुने गरेको उनले बताइन् ।
स्थानीयको विरोधको बाबजुद २९ वैशाख ०७३ मा सिरहा नगरपालिकाले इँटा उद्योग खोल्न सिफारिस दिएको थियो । सो सिफारिसका आधारमा घरेलु तथा साना उद्योग लाहानले उद्योग सञ्चालनको प्रमाणपत्र दिएको हो । उद्योग सञ्चालन भएपछि आँगनमा बस्नै नसकिने भएको स्थानीयको गुनासो छ।
मो. फइम राइनले इँटा उद्योगका कारण गर्मीमा हावामा बस्न र जाडोमा घाम ताप्न नपाएको बताए । उनले भने, ‘घर–आँगन कालो हुन्छ, जतिखेरै गनाउने हावामा बस्नुपरेको छ, घर छोडेर कहाँ जानु ?’ बच्चाहरूलाई रुघा–खोकी, छाती दुख्ने र ज्वरो आउने हुन थालेको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमानादेखि पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा, बस्तीको पाँच सय मिटरभित्र, शैक्षिक तथा धार्मिक स्थलमा असर पर्न सक्ने ठाउँमा इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा घरेलु तथा साना उद्योगका एक कर्मचारीले भने, ‘सिरहा नगरपालिकाले वरपरमा बस्ती छैन भन्ने सिफारिस दिएको छ, सम्बन्धित ठाउँका बासिन्दाले विरोध जनाएपछि स्थलगत अनुगमन गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ, तर तत्कालीन उद्योग अधिकृतबाट अनुगमन भयो कि भएन थाहा छैन ।’ सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा तत्कालीन उद्योग अधिकृत राजेन्द्रलाल कर्ण अख्तियारको फन्दामा परेका थिए ।
श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या र मुटुरोगको खतरा
इँटा उद्योगबाट निस्केको कोइलाको खरानी, धुवाँ र अन्य प्रदूषणले श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोग, दम, खोकीलगायत समस्या हुने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका प्रमुख चुमनलाल दासले बताए । उनले लगातार यस्ता समस्या भइरहे मुटुमा असर गर्नुका साथै अन्य गम्भीर खालका रोग लाग्ने बताए ।
सय मिटरमा नै विद्यालय, बारम्बार बिरामी हुन्छन् बालबालिका
उद्योगको सय मिटर उत्तरमा जनता आधारभूत विद्यालय र मस्जिद छ । पूर्वमा दलितदीप आधारभूत विद्यालय छ । उद्योगको धुवाँले बालबालिका बारम्बार बिरामी हुने गरेका छन् । जनता आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक सीताकुमारी मण्डलले विद्यार्थी रुघाखोकी, आँखा पाक्ने, टाउको दुख्नेलगायत समस्याबाट हैरान भएको बताइन् । कक्षा ४ सम्म पढाइ हुने सो विद्यालयमा एक सय २० विद्यार्थी छन् । उनले भनिन्, ‘उद्योगबाट निस्केको धुँवाको मुस्लोले हामी हैरान छौँ, बिरामी हुन थालेपछि कतिपय विद्यार्थीले त विद्यालय नै छाडेका छन् ।’
अर्को दलितदीप आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म पढाइ हुन्छ । त्यहाँ ६० विद्यार्थी छन् । इँटा उद्योग रहेको सुखाचैना आसपास तीन सामुदायिक र पाँच निजी विद्यालय रहेको दलितदीपका प्रधानाध्यापक रामेश्वर ठाकुरले बताए । उद्योगले सबै विद्यालयलाई असर गरिरहेको उनको भनाइ छ।
जनतालाई रोक्ने आश्वासन, उद्योगीलाई अनुमतिपत्र
इँटा उद्योग रोक्न पटकपटक स्थानीयले नगरपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहान धाए । सिरहा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत इन्द्रदेव यादव र तत्कालीन उद्योग अधिकृत राजेन्द्रलाल कर्णले रोक्ने आश्वासन मात्र दिएको सिरहा नगरपालिका–१४ का अब्दुल रहमानले बताए । उनले भने, ‘बोलवाला र पैसावालाको अगाडि हाम्रो कुराको सुनुवाइ भएन, हामी थाक्यौँ ।’
उद्योग अधिकृत कर्णले स्थलगत अनुगमनमा आउने बताएर पनि नआएको रहमानको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन धाए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।
तरकारीको हरियो हराउँछ
तरकारी बालीमा कोइलाको कालो खरानी र धुवाँले डरकटुवा रोग लाग्न सक्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा. रामचन्द्र यादवले बताए । ‘तरकारी बालीमा हरियोपनमा गिरावट आएर गर्मीले फूल सुक्न सक्छ, तरकारीका चिचिला कुहिन सक्छन्,’ यादवले बताए । तरकारीका बिरुवा सुक्ने, पूmल पनि सुक्ने र तरकारी जति धोए पनि कालो दाग नजाने उनको भनाइ छ ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खोलेको हुँ : सञ्चालक
सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर इँटा उद्योग सञ्चालन गरेको ऋषि इँटा उद्योगका सञ्चालक वकिलदेव साहले बताए । ‘कसैले अहिलेसम्म कुनै प्रकारको विरोध गरेको मलाई थाहा छैन,’ उनले भने । उनले दैनिक कति इँटा उत्पादन हुन्छ भन्न नसकिने बताए । साहले भने, ‘गत वर्ष ६ लाख इँटा उत्पादन भयो, यो वर्ष १० लाख उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।’
#इँटा उद्योगको धुवाँ
मुख्यमन्त्रीद्वारा इस्लामिक महिला विद्यालयको उद्घाटन
राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनुपर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति यादवको जोड
२३ वर्षपछि फरार अभियुक्त पक्राउ
एसीड पीडित दिदीको मृत्यु, बहिनीको उपचार खर्चकै अभाव
प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको रडाको
सम्झना दासको मृत्यु, बुबा भन्छन् ‘अपराधिलाई फाँसि दिइयोस् सरकार !
उपचार खर्चमा छुटसहित अस्पतालले दियो सम्झनाको शव परिवारलाई
बिपी समाजवादी कि उदार प्रजातन्त्रवादी ?
नुरप्रसादको हर्कत : मुद्दा हारेपछि न्यायाधीशलाई अश्लिल गालीगलौज, इजलास अधिकृतमाथि कुर्सी प्रहार !
‘पुराना विधिले देशमा परिवर्तन हुँदैन’
गण्डकी प्रदेश सभाले बनायो २२ विधेयक
राष्ट्रपतिद्वारा इन्द्रजात्रा अवलोकन